Su'aalaha la isweydiiyo - Civen Metal Material (Shanghai) Co., Ltd.
Waa maxay bireedka naxaasta ah?
Biraha naxaasku waa maaddo naxaas ah oo aad u khafiif ah. Waxaa loo qaybin karaa habka laba nooc: duub (RA) bireed naxaas ah iyo bireedka naxaasta ee elektrolytigga (ED). Biraha naxaasku wuxuu leeyahay tabinta korontada iyo kuleylka oo aad u fiican, wuxuuna leeyahay hantida gaashaanka calaamadaha korontada iyo birlabka. Biraha naxaasta ah ayaa si aad ah loogu adeegsadaa soo saarista qaybaha elektiroonigga ah ee saxda ah. Horumarinta wax -soo -saarka casriga ah, baahida loo qabo alaab elektaroonig ah oo khafiif ah, fudud, yar yar oo la qaadan karo ayaa horseeday codsiyo aad u ballaaran oo loogu talagalay bireedka naxaasta ah.
Waa maxay bireedka naxaas la duubay?
Xarigga naxaasta ah ee la duubay ayaa loo yaqaan RA -bireedka naxaasta ah. Waa maaddo naxaas ah oo lagu soo saaro duudduubid jireed. Sababtoo ah hannaanka wax -soo -saarkiisa, bireedka naxaasta RA wuxuu leeyahay qaab dhismeed goobeed ah. Oo waxaa lagu hagaajin karaa dabacsanaanta iyo xanaaqa adag iyadoo la adeegsanayo habka ka -hortagga. RA-foil copper waxaa loo adeegsadaa soo saarista alaabada elektiroonigga ah ee aadka u sareysa, gaar ahaan kuwa u baahan waxoogaa dabacsanaan ah maaddada.
Waa maxay bireedka naxaasta ee elektrolytka/korontada ku dhegan?
Xadhiga naxaasta ee elektrolytigga ah waxaa loo yaqaan ED -bireedka naxaasta ah. Waa alaab -bireed -naxaas ah oo lagu farsameeyo habka dhigaalka kiimikada. Sababtoo ah dabeecadda geedi -soo -saarka, bireedka naxaasta elektrolytigga ah wuxuu leeyahay qaab dhismeed columnar ah. Habka wax -soo -saarka ee bireedka naxaasta ee elektrolytigga ah waa mid fudud oo waxaa loo adeegsadaa alaabada u baahan tiro badan oo hababka fudud ah, sida looxyada wareegga iyo batroolka lithium electrodes -ka xun.
Maxay ku kala duwan yihiin RA iyo ED foils copper?
Xirmooyinka naxaasta RA iyo bireedka naxaasta ee elektrolytigga ah waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iido darrooyinkooda xagga soo socda:
Xadhkaha naxaasta RA ayaa ka sii nadiifsan marka la eego macdanta naxaasta;
Xirmooyinka naxaasiga ah ee RA wuxuu leeyahay wax -qabad guud oo ka fiican kan ka samaysan biraha naxaasta elektrolytka marka la eego guryaha jirka;
Waxaa jira farqi yar oo u dhexeeya labada nooc ee bireedka naxaasta marka la eego guryaha kiimikada;
Marka la eego qiimaha, ED -bireedka naxaasta ah wuu u sahlan yahay soosaarka baaxadda leh sababta oo ah habka wax -soo -saarkiisa oo aad u fudud wuxuuna ka qaalisan yahay bireedka naxaasta ee la duubay.
Guud ahaan, bireedka naxaasta RA waxaa loo adeegsadaa marxaladaha hore ee waxsoosaarka wax soo saarka, laakiin marka habka wax -soo -saarku noqdo mid qaan -gaar ah, ED -biil -naxa ayaa la wareegi doona si loo yareeyo kharashaadka.
Maxaa loo adeegsadaa biraha naxaasta ah?
Biraha naxaasku wuxuu leeyahay tabinta korontada iyo kuleylka, sidoo kale wuxuu leeyahay sifooyin gaashaan wanaagsan oo loogu talagalay calaamadaha korantada iyo birlabka. Sidaa darteed, waxaa badanaa loo adeegsadaa sidii dhexdhexaad loogu talagalay socodsiinta korantada ama kuleylka ee alaabada elektiroonigga ah iyo korantada, ama sidii qalab gaashaan oo loogu talagalay qaar ka mid ah qaybaha elektiroonigga ah. Sababo la xiriira muuqaalka muuqda iyo muuqaalka jirka ee naxaasta iyo naxaasta naxaasta ah, waxaa sidoo kale loo adeegsadaa qurxinta dhismaha iyo warshadaha kale.
Maxaa laga sameeyaa bireedka naxaasta ah?
Alaabta ceeriin ee loogu talagalay bireedka naxaasku waa naxaas saafi ah, laakiin alaabta ceeriin waxay ku jirtaa gobollo kala duwan iyadoo ay ugu wacan tahay habab wax soo saar oo kala duwan. Muraayadda naxaasta ah ee la duudduubay guud ahaan waxaa laga sameeyaa xaashiyo naxaas ah oo kaydiyo ah oo la dhalaaliyey kadibna la duubay; Fiilooyinka naxaasta ee elektrolytigga ah wuxuu u baahan yahay inuu ku rido alaabta ceyriinka ah xalka sulfuric acid si loogu milmo sida naxaas-qubeyska, markaa waxay aad ugu badan tahay in la isticmaalo alaabta ceyriinka ah sida darbadda naxaasta ama siligga naxaasta si ay si fiican ugu milmaan sulfuric acid.
Miyuu xumeeyaa naxaasku?
Aaladaha naxaasku aad bay ugu firfircoon yihiin hawada waxayna si fudud ula falgali karaan ion oksijiinta hawada si ay u sameeyaan oksaydh naxaas ah. Waxaan ku daaweynaa dusha bireedka naxaas heerkulka qolka ka-hortagga oksaydhka inta lagu guda jiro geeddi-socodka wax-soo-saarka, laakiin tani kaliya waxay dib u dhigaysaa waqtiga marka bireedka naxaas la oksaydho. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo isticmaalo bireedka naxaasta ka dib furitaanka. Oo ku kaydi bireedka naxaasta ah ee aan la isticmaalin meel engegan, meel aan iftiin lahayn oo ka fog gaasaska kacsan. Heerkulka kaydinta lagu taliyey ee bireedka naxaasku waa qiyaastii 25 digrii Celsius oo qoyaanku waa inuusan dhaafin 70%.
Miyuu naxaasku kaarboor noqdaa?
Bireed Copper ma aha oo kaliya wax tabin, laakiin sidoo kale wax warshadaha ugu kharash-ool ah la heli karo. Biraha naxaasta ahi wuxuu leeyahay koronto iyo kulayl ka fiican qalabka birta caadiga ah.
Ma cajalad bireedka naxaas ayaa labada dhinacba ka socota?
Cajaladda bireed ee naxaasku guud ahaan waa tabin dhinaca naxaasta ah, dhinaca dhejintana sidoo kale waxaa lagu samayn karaa tabinta iyada oo budada tabaysa lagu dhejiyo dhejiska. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso inaad u baahan tahay cajalad bireed naxaas leh oo hal dhinac leh ama cajalad bireed oo naxaas leh oo laba gees leh markii la iibsanayey.
Sideed uga saareysaa oksaydhka biraha biraha?
Biraha naxaasta oo leh oksaydhka dushiisa wax yar ayaa lagu saari karaa isbuunyo aalkolo ah. Haddii ay tahay oksaydh muddo dheer ah ama oksaydhka aagga weyn, waxay u baahan tahay in laga saaro iyadoo lagu nadiifinayo xal sulfuric acid.
Waa maxay bireedka ugu fiican naxaas ee galaaska wasakhaysan?
Birta CIVEN waxay leedahay cajalad bireed naxaas ah oo si gaar ah loogu talagalay galaas wasakhaysan oo aad u fudud in la isticmaalo.